Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » WTM London kpughere Saudi dị ka Onye Mmekọ Premier maka 2021
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Fahd Hamidaddin, onye isi oche nke Saudi Tourism Authority (STA).
Saudi Arabia na -akwalite ụgbọ ala ya zuru ụwa ọnụ iji rute nde ndị ọbịa 100 kwa afọ ka ọ na -erule 2030.
Saudi mbụ mepere ụzọ na obi ya nye ndị njem nlegharị anya mba ofesi na Septemba 2019.
Mmekọrịta dị elu na WTM London ga-ahụ na Saudi nọ n'ọnọdụ dị ka onye ọkpụkpọ zuru ụwa ọnụ.
Ọhụụ Saudi 2030 bụ atụmatụ maka ọdịnihu mmekọrịta akụ na ụba nke alaeze Saudi Arabia.
Saudi, ekwuputala ezigbo ụlọ nke Arabia dị ka Onye Mmekọ Premier nke WTM London 2021 ka obodo ahụ na -agbago ọsọ ya zuru ụwa ọnụ iji rute nde ndị ọbịa 100 kwa afọ site na 2030.
Ebumnuche a na-achọsi ike bụ akụkụ nke ọhụụ 2030 nke Saudi, ụkpụrụ maka ọdịnihu mmekọrịta akụ na ụba nke Saudi Arabia, nke emere iji gbasaa akụ na ụba mba ahụ wee mepụta ụlọ ọrụ njem na-eme nke ọma.
Mmekọrịta dị elu na WTM London ga -ahụ na Saudi nọ n'ọkwa dị ka onye ọkpụkpọ zuru ụwa ọnụ na onye na -eduga njem nlegharị anya n'ahịa mba ụwa.
Fahd Hamidaddin, onye isi ụlọ ọrụ Saudi Tourism Authority (STA), kwuru, sị:
“Site na ndị nnọchi anya anyị nke ndị mmekọ, ọrụ na ndị nnọchi anya anyị na -aga ruo taa, ọnụnọ anyị na WTM London nke afọ a dị mkpa na idobe Saudi dị ka otu n'ime ebe ntụrụndụ kachasị ọhụrụ n'ụwa maka ndị isi ụlọ ọrụ mba ụwa. Onyinye njem nlegharị anya nke Saudi pụrụ iche, dị iche iche na achọpụtabeghị ya, anyị na -atụkwa anya ịnabata ndị ọbịa WTM London na ọbịa nke ejiri mara anyị. ”
“Anyị kpebisiri ike imekwu ihe Saudi ika, na -agbasawanye ọnụnọ mba anyị na iwulite mmekọrịta n'etiti ndị mmekọ tụkwasịrị obi ga -adị oke mkpa n'inyere anyị aka ịkwalite ntụgharị n'ahịa isi mmalite anyị. "
Ndị nnọchi anya Saudi na WTM London ga -akwalite ma mee ka amata gbasara ọdịbendị bara ụba, ihe nketa, na ohere njem nlegharị anya. N'ebe a na -ere nri, ndị ọbịa WTM London na ndị ọbịa ga -enwe ohere inyocha onyinye Saudi na -enye, na njem mmekọrịta site n'ọzara ọzara na ndagwurugwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ebe ochie mgbe ochie na ihe ịtụnanya Oké Osimiri Uhie.